#6-Igumbi elinye lokulala eliNtsha-imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya elunxwemeni! - I-Airbnb
#6-Igumbi elinye lokulala eliNtsha-imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya elunxwemeni!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGuy
Eli gumbi litsha lobuhle obutofotofo begumbi elinye libekwe ngokulula phakathi kweenyawo ezili-100 zepropathi ephambili. Inegumbi lokulala elikhulu, ibhedi enkulu yokumkanikazi enegumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Ikwanegumbi lokuhlala elipholileyo, indawo yokutyela kunye nekhitshi eligcweleyo. Kukuhamba umgama ukuya elunxwemeni kunye nodumo lwaseWest Bay Beach okanye eWestend Village. Chitha imini yakho echibini lethu elingapheliyo kunye nebhafu eshushu. Ijikelezwe ngamahlathi ashinyeneyo kunye nokubukeka komhlaba, umgama nje wemizuzu emibini ukuya elunxwemeni.
Le suite yongezwa entsha eCasa Blanca! Indawo yabucala ngokupheleleyo. Izinyuko ezingama-200 nje ukuya elunxwemeni! Unokufikelela kwidama lethu elikhulu lamanzi anetyuwa elingapheliyo kunye nebhafu eshushu. Indawo yokuzonwabisa yangaphandle eneendawo zokuhlala, ii-hammocks kunye neetafile zepatio. Sinikezela ngamava okugqibela eCaribbean! Zonke izinto ezilungileyo zehotele ye-boutique, ngesiqingatha seendleko.
Isetyenziswa nangabanye phandle amanzi anetyuwa ibonakala ngathi ayinamda inamanzi ashushu ipuli
Uluntu olutsha olukumgangatho ophakamileyo kunye neehotele ezimbini zeenkwenkwezi ezintlanu kunye neendawo zokutyela, uninzi lwamakhaya aqeshisayo okanye aphuma ngaphandle. Yiva ukuphithizela kunye nokuphithizela kweWest Bay okanye iWest End okanye uphumle nje kwaye wonwabele umoya kwindawo yethu yeeholide. Sihamba ngemizuzu emihlanu ukuya kwiNkampani yeRoatan Rum, iGumbalimba Park, iSouth Shore Canopy Adventures kunye ne-zip line, kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane!
Sineqela labantu abathathu abaza kukunceda. Mna ngokwam, uMphathi wepropathi yam uDolly, (apha iintsuku ezi-6 ngeveki ukusuka ngo-9:00 AM ukuya ku-4:00 PM). Sikwanaye nomgcini webala obalaseleyo ogama linguRamone olapha ukusuka ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo, 7:00 AM ukuya 4:00 pm. URamone uthetha iSpanish kuphela kodwa umguquleli usebenza kakuhle!
Sineqela labantu abathathu abaza kukunceda. Mna ngokwam, uMphathi wepropathi yam uDolly, (apha iintsuku ezi-6 ngeveki ukusuka ngo-9:00 AM ukuya ku-4:00 PM). Sikwanaye nomgcini weba…